Gemstone Rings - ထူးခြားသောကျောက်မျက်ရတနာချိတ်ဆက်မှုလက်စွပ်
Gemstone Rings & ထူးခြားသော Gemstone Engagement Rings
တောက်ပသောထိပ်တန်းပုံရိပ်ဆင်ထားသောစိန် Halo လက်စွပ်
ထိပ်တန်းအဆင့်အတုပြုလုပ်ထားသောစိန်များ Eternity Ring Band
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 219 ရောင်းဈေး € 159
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 189 ရောင်းဈေး € 129
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 189 ရောင်းဈေး € 139
နှလုံးပုံသဏ္Diamondာန်စိန်လက်စွပ် - အရည်အသွေးတူသောနှလုံးစိန်လက်စွပ်
အမျိုးသမီးကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ်များကိုနှစ်ထောင်ချီ။ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အရင်တုန်းကအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးများနှင့်မူပိုင်ခွင့်များသာကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်လှပသောလက်စွပ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သော်လည်းအချိန်ကာလများပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသော Pure Gems လက်ဝတ်ရတနာတွင်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူအတွက်ဝယ်ယူရန်လှပသောကျောက်မျက်ကွင်းများကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ်စုဆောင်းမှုတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး တွေ့လိမ့်မည် ပတ္တမြား လှပသောအနီရောင်ပတ္တမြား၊ နီလာလက်စွပ် ဆွစ်ဇာလန်မှအပြာရောင် Sapphires နှင့်အတူတစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတော်ဝင် မြ Simulant Ring နှင့်များစွာသောအမျိုးမျိုး စိန် Simulant လက်စွပ် နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ငါတို့၏ Light Blue သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမူကွဲအချို့ဖြစ်သည် သဘာဝ Topaz လက်စွပ်။ Gemstone Rings နှင့် ပတ်သတ်၍ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိသောကွင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမျိုးသမီးများအတွက်သူမအတွက် ၀ ယ်ရန်သာမကအထူးအခွင့်အရေးအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ချစ်သူများနေ့နေ့၊ ခရစ်စမတ်၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့သို့မဟုတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ထူးခြားသော Gemstone စေ့စပ်လက်စွပ်
ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရှိအမျိုးသမီးများအတွက်စေ့စပ်လက်စွပ်များကို ၀ ယ်ယူနေကြသည်။ အမျိုးသားများသည်သူတို့၏အနာဂတ်ဇနီးအားအဆိုပြုနိုင်ရန်အတွက်စေ့စပ်လက်စွပ်တစ်ခုဝယ်သည်။ Pure Gems တွင်သင်သည်ထူးခြားသောလှပသောအရောင်များကြောင့်လူကြိုက်များလာသည့် Colorful Gemstone Engagement Rings ကဲ့သို့သောထူးခြားသော Engagement Rings ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောကျောက်မျက်ရတနာကွင်းဆက်အားလုံးသည် ၁၀၀% ပictိပက္ခကင်းစင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောအနီရောင်ရှိသောအနီရောင်နှင့်အတူကျောက်မျက်ရတနာ Ruby Engagement Rings နှင့်ဆွစ်ဇာလန်မှလာသည့် Sapphire နှင့်အပြာရောင် Sapphire စေ့စပ်လက်စွပ်များကဲ့သို့သောရောင်စုံကျောက်မျက်ရတနာချိတ်ဆက်မှုလက်စွပ်အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သဘာဝသတ္တုတူးဖော်သည့်အဖြူရောင်အပြာရောင်ရှိသည့် Top Topaz Engagement Rings ကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာချိတ်ဆက်ကွင်းများရှိသည်။
Lab က Diamond Engagement Rings ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်
Lab Created Diamond Engagement Rings သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်တွင်သဘာဝစိန်စေ့စပ်လက်စွပ်၏စျေးနှုန်းအနည်းငယ်မျှဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ စိန်များသည်အနောက်ကမ္ဘာတွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရေပန်းစားသည်။ ဤအဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းမြင်သာသောကျောက်မျက်ရတနာများသည်အလွန်လှပသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိန် simulant စေ့စပ်လက်စွပ်သည်စိန်အတွက်4C လုံးလုံးရှိသဘာဝစိန်များ၏အရည်အသွေးထက်သာလွန်သည်။ ဖြတ်, အရောင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ကာရက်။ သဘာဝကျသောကာရက်ရှိစိန်လက်စွပ်သည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ မှ ၁၀.၀၀၀ ကြားကုန်ကျသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒေါ်လာ ၂၅၀ အောက်သာသာသာရှိသောလှပသော Simulant Engagement Rings ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Emerald Simulant Engagement Rings အတွက်လည်းအလားတူပင်စျေးနှုန်းချင်းတူညီပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးလည်းရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျသောစေ့စပ်လက်စွပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၅၀ အောက်တွင်စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ဖန်တီးထားသောစိန်ကွင်းအားလုံးသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသောဆက်သွယ်ရေးကွင်းများဖြစ်သည်။ လှပသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်ကို ၀ ယ်ရန်တက်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Read ဘ‌‌လော့ခ် Gemstone နှင့် Diamond Rings အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။ ငါတို့ဖတ်ပါ Solitaire စိန်လက်စွပ် ငါတို့အတွက်လမ်းပြ စျေးပေါသောစေ့စပ်လက်စွပ် လမ်းညွှန်, အရည်အသွေး, ခေတ်ရေစီးကြောင်း & ဒီဇိုင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ 1 ကာရက်စေ့စပ်လက်စွပ်, နီလာနှင့်စိန်လက်စွပ် နှင့်အဘို့အ5အကြောင်းပြချက်ရှာပါ Silver ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ် နှင့်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှရှာဖွေပါ တူအောင်စိန်လက်စွပ်.
description: ဒီအံ့ဖွယ်မြ Emulald Simulant Ring သည်ရုရှားနိုင်ငံမှ ၁.၄ctct Cushion Cut Emerald Simulant ကို Centre Gemstone အဖြစ်ထားရှိသည်။ ၂၄ လှပသော Brilliant ဖြတ်ထားသော Reflective Diamond Simulants ဖြင့်ကျောက်မျက်ရတနာကို ၉၂.၅% Pure Silver ring band တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လူတိုင်းသည်ဤကြီးသောလက်စွပ်ကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မည်။
လက်စွပ် Size: သင်သည်ဤလက်စွပ်ကိုအရွယ်အစား ၅၄ သို့မဟုတ် ၅၆ ဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်စွပ်၏အ ၀ န်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင့်လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရှည်ဖြစ်သည်။ သင်၏လက်စွပ်ကိုတိုင်းတာရေးကြိုးသို့မဟုတ်တိုင်းတာသောချောင်းတစ်ချောင်းနှင့်ကြိုးသေးငယ်ဖြင့်အလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်သည်။ သင်၏လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရေအတွက်သည်သင်လိုအပ်သောလက်စွပ်အရွယ်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့လက်စွပ်အရွယ်အစားကိုအခြားနိုင်ငံများမှာဘာလဲ Ring Size Converter Chart ဖြင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီပုံတူကူးယူရရန် မြ Ring။ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်လာမှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံစာများအတွက်၊ အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသောလက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်လျှင်ရက် ၁၀၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့ (သို့) အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
သင့်ရဲ့ browser ကဗီဒီယို tag ကိုထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။
description: ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Brilliant Gems Halo Ring သည် ၁.၂၅ ကာရက်ရှိ Brilliant Cut Diamond Simulant ကို ၂၂ သေးငယ်သည့်စိန်ပွင့်များဖြင့်ထူးကဲသော halo ဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ကျောက်မျက်တစ်လုံးချင်းစီတွင်စိန် ၉ လုံးပါသည့် ၉၂.၅% Pure Silver band တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီလက်စွပ် 1.25 ကျော်စိန် Simulator ကိုရှိပါတယ်။
လက်စွပ် Size: သင်သည်ဤလက်စွပ်ကိုအရွယ်အစား ၅၀၊ ၅၂၊ ၅၄၊ ၅၆ သို့မဟုတ် ၅၆ ဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်စွပ်၏အ ၀ န်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင့်လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရှည်ရှိသည်။ မင်းရဲ့လက်စွပ်ကိုတိုင်းတာရေးကြိုးနဲ့တိုင်းတာတဲ့တုတ်နဲ့ကြိုးသေးလေးတစ်ခုနဲ့အလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်တယ်။ သင်၏လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရေအတွက်သည်သင်လိုအပ်သောလက်စွပ်အရွယ်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့လက်စွပ်အရွယ်အစားကိုအခြားနိုင်ငံများမှာဘာလဲ Ring Size Converter Chart ဖြင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် Elegant ကျောက်မျက် Ring ကို။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
description: ဤစင်ကြယ်သော Topaz လက်စွပ်သည်ဘရာဇီးမှ ၁.၉ ကာရက်ရှိ Cushion Cut Topaz ကို Centre Gemstone အဖြစ်ရရှိထားသည်။ Sky Blue Topaz သည် ၉၂.၅% Pure Silver လက် ၀ တ်တန်းတစ်ခုတွင်အလယ်အလတ် Diamond Simulants နှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားနေ့တိုင်းတန်ဖိုးထားစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
description: Eye Catching Diamond Simulant Ring သည် ၂.၀၀ ကာရက်ရှိ Brilliant Cut Diamond Simulant ကို Centre ကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၂.၀၀ ကာရက်ရှိ Diamond Simulant ကို ၉၂.၅% သန့်စင်သော Pure Silver band တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်တောက်ပသောဖြတ်စိန် ၇ လုံးကိုတစ်ဖက်စီတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ 2.00ct သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးဆုံးစိန်ပွင့်လက်စွပ်ဖြစ်သည်။
description: ဒီအပြာရောင် Sapphire Ring သည်မင်းသမီး Diana နှင့်မင်းသမီးကိတ်တို့ကဲ့သို့သောဗြိတိသျှမင်းသမီးများမှ Rings တို့၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မင်းသမီးကဲ့သို့ခံစားမိစေလိမ့်မည်။ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ၂.၆ ကာရက်ရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Oval Cut Blue Sapphire နှင့် Diamond Simulants ၁၄ ခုသည် Pure Silver band တွင် ၉၂.၅% ရှိသည်။
စစ်မှန်သော Sapphire: ဤအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှအရည်အသွေးကောင်းပြီးလှပသောစစ်မှန်သောအပြာရောင် Sapphire ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှထုတ်လုပ်သော Sapphire သည်တူညီသောဒြပ်စင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ အပူနှင့်ဖိအားများသည်ကျောက်တုံးမှထုတ်လုပ်သောသဘာဝ Sapphire နှင့်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီသော်လည်းအညစ်အကြေးများကင်းသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီအပြာရောင်ရရန် နီလာလက်စွပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
description: ဤဇိမ်ခံအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းလက်စွပ် Band သည် ၂၁ perfectlyုံထိုးသွင်းထားသော Brilliant Cut Diamond Simulants ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကျောက်မျက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၉၂.၅% Pure Silver band တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထူးခြားသောအဆင်တန်ဆာများပါရှိသည်။ ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလက်စွပ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒီဇိုင်းကြောင့်သင် ၀ တ်ဆင်သည့်အခါသင့်ကိုအထူးခံစားရစေသည်။
description: ဒီအထူးမြွှာ simulant Ring သည်ရုရှားနိုင်ငံမှ ၁.၄ ကာရက်ကူရှူဖြတ်ထားသော Emerald Simulant ကို၎င်း၏ကျောက်မျက်ရတနာစင်တာအဖြစ်ထားရှိသည်။ Gem ကို ၉၂.၅% Pure Silver ring band မှာတပ်ဆင်ထားပြီး ၃၈ လုံးကို Diamond Simulants နဲ့တွဲဖက်ထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကသင့်ကိုနေ့စဉ်ခံစားမှုခံစားစေမှာပါ။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် မြကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
description: ဒီအပြင်းတောက်ဆုံးထာဝရလက်စွပ်ဟာ ၉၂.၅% Fine Silver မှာထည့်ထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့် Brilliant Cut simulated စိန်များ၏အပြည့်အ ၀ စက်ဝိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ၎င်းသည်စူးရှတောက်ပသောအံအားစိုက်စက် ၂ ဝစုစုပေါင်းကိုအလင်းတိုင်းကိုလှည့်ပတ်ဖော်ပြပေးသည်။ ဒီလက်စွပ်ဟာသူ့ဘာသာနဲ့အခြားလက်စွပ်တစ်ခုနဲ့အတူကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။
description: ဤအသေးစိတ်ကျသော Sapphire Eternity Ring Band သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ၀.၂ ကာရက်ရှိ Sapphires ၂၀ လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျောက်မျက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၉၂.၅% Pure Silver band တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထူးခြားသောအဆင်တန်ဆာများပါရှိသည်။ ဒီချစ်စရာကောင်းသောလက်စွပ်၏အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းကသင် ၀ တ်ဆင်သည့်အခါသင့်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်စေသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီနှစ်ဆယ်ရရန် Saphires လက်စွပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
description: ဒီ Diamond Simulant Ring ၏အလယ်ဗဟိုတွင် Royal 1.5 92,5 karat Princess Cut Diamond Simulant သည် ၉၂.၅% Fine Silver band တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး Brilliant ၁၆ ခုဖြတ်ပြီးအလွန်ရောင်ပြန်ဟပ် Diamond Simulants ဖြစ်သည်။ Silver band ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဤလက်စွပ်၌စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ၃၈ ခုဖြတ်ထားသောစိန်ပွင့်များရှိသည်။